स्प्याकल कसरी गर्ने? स्पट्टी के हो के यसले यसको मतलब गर्दछ टीडीके - कसरी लेख्ने।इन्फो
कसरी साइट लिने, कसरी शब्दहरूको सही हिज्जे हो? हालको हिज्जे नियम जसले प्रश्नको जवाफ दिन्छ, हिज्जे गाइड शब्दकोश साइट।
तपाईको लागी रहेको शब्द लेख्नुहोस्
स्पट्टी कसरी लेख्ने
स्प्याकल्ड सही हिज्जे
तपाईंको बच्चाले जन्मेको पहिलो दिनदेखि नै सिक्न थाल्छ, र उसले स्कूल सुरु गरेको पहिलो दिनमा लेख्न थाल्छ। हाम्रो जीवनमा लेखन र शब्दहरूको ठूलो महत्त्व हुन्छ। शब्दहरूलाई हिज्जे सही रूपमा महत्त्वपूर्ण र आलोचनात्मक छ। कृपया शब्दहरू ठीकसँग लेख्न सावधान हुनुहोस् किनभने हामी सिक्ने तरिका जारी राख्दछौं। यदि हामी सहि तरिकाले सिक्यौं भने, हामी सही बोल्न र लेख्न बानी हुनेछौं।
शब्दहरूको बीचमा भिन्नता हुन सक्छ, यद्यपि हामीले भुल्नु हुँदैन भन्ने एउटा सुनौलो नियम विभिन्न शब्दहरूमा हुन सक्छ जुन एउटै अर्थ हुन्छ। उदाहरणका लागि, स्वतन्त्रता र क्षमा शब्द एकै अर्थमा प्रयोग गरिएको छ, शब्दहरू छुट्टै भए पनि। आउन सक्छ।
शब्दहरु मास्टर गर्न को लागी, शब्दहरु कसरी लेखिएका छन् भनेर ज्ञान हुनु आवश्यक छ। तपाईं यसलाई सराहना पनि गर्न सक्नुहुन्छ, हिज्जे नियमहरूलाई एक्लै छोड्नुहोस्, त्यस वाक्यको अर्थ वाक्यमा अल्पविरामको परिवर्तनसँग पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुन सक्दछ। यस कारणका लागि, हामीले हिज्जेका नियमहरूलाई नजिकबाट पालना गर्नुपर्दछ र तिनीहरूलाई सहि रूपमा प्रयोग गर्न सावधानी अपनाउनु पर्छ। हाम्रो भाषाको विकास र बाँच्नको लागि प्रत्येकले आ-आफ्ना हेरचाह देखाउनु पर्छ। हाम्रो विगत, हाम्रो ईतिहास र हाम्रो भूत हाम्रो भाषामा छ। शब्दहरू सही तरिकाले लेख्नु र नियमहरू अनुसरण गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।
लेखको साथ पाठकलाई सन्देश सही ढ correctly्गले पुर्‍याउन स्रोतको महत्त्वपूर्ण भूमिका र जिम्मेवारी छ। तसर्थ, सन्देश पठाउने व्यक्तिले लिखित रूपमा सन्देश प्रवाह गर्दा पहिले केहि हिज्जे नियमहरूको पालना गर्नुपर्दछ विशेष गरी विद्यार्थीहरूले तिनीहरूको परियोजना रिपोर्ट लेख्दा हिज्जे नियमहरूको पालना गर्न ध्यान दिनुपर्दछ। लेख्ने क्रममा विद्यार्थीहरूले गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गल्ती यो हो कि उनीहरूले विराम चिह्नहरूमा धेरै ध्यान दिएनन्। यद्यपि कम्प्युटर सफ्टवेयरले प्रयोग गरेको (उदाहरणका लागि एक वर्ड प्रोसेसर) आफैंले हिज्जे जाँच गर्दछ र प्रयोगकर्तालाई केही चेतावनी दिन्छ। यी चेतावनीहरूमा ध्यान दिएर धेरै गल्तीहरू रोक्न पर्याप्त हुन सक्छ।
स्पट्टीको अर्थ के हो?
स्प्याकल कसरी गर्ने?
स्पटेड स्पेलिंग गाइड
सामान्य माफी, -फि
कसरी २०१ 2016 लाई लेख्ने